Ninkii Dhawaan ay Qabteen Sirdoonka Dalka Jarmalka oo Isku Daldelay Xabsiga Dhexdiisa (VIDEO) - Hablaha Media Network
Ninkii Dhawaan ay Qabteen Sirdoonka Dalka Jarmalka oo Isku Daldelay Xabsiga Dhexdiisa (VIDEO)
HMN:- Waxaa xabsiga isku dal-dalay Nin Siiriyaan ahaa oo maalmo ka hor ay qabteen booliska dalka Jarmalka, ka dib markii gurigiisa laga helay waxyaabaha qarxayada laga suubiyo.
Wiilkan oo lagu magacaabi jiray Jaber Al-bakr oo da’diisu ahayd 22 jir, ayaa lagu eedeeyay inuu qorsheynayay in uu weerarro is qarxin ah ka geysto bariga magaalada Leipzig ee dalka Jarmalka, balse ciidamada Sirdoonka oo ka warhelay tabaabulshadiisa ayaa gacanta ku dhigay.
Ninkan ayaa inta uusan is dilin ka hor diiday inuu cuno wax raashin ah, waxaana loo baahnaa in si dhow arrimihiisa ay ula socdaan booliska iyo maamulka xabsigaasi, sidaasi darteedna waxaa la sheegayaa in ay ahayd in lagu hayo xabsi Kaamarooyin leh.
Jaber Al-bakr ayaa dalka Jarmalka yimid sanadkii 2015-kii, isaga oo isku soo dhex qariyay qaxootigii faraha badnaa ee lugta ku soo galay dalka Jarmalka, booliska ayaa waxay todobaadkii hore arkeen inuu nin kani haysto walxaha laga sameeyo qaraxyada.
Geeridiisan deg dega ayaa ah mid hakin doonta baaritaankii ay ku wadeen ninkaasi, iyo Cidii uu gacansaarka la lahaa, waxayna xaaladda baaritaanka ay ka dhigaysaa mid cakiran.